Inrico T199 3G / Wifi (Android yakavhurwa) - Network maRadio
musha / Radios / Network maRadio / Inrico T199 3G / Wifi (Android kukiyiwa)
Sarudza yako 2G / 3G Bhendi *
W3: GSM: 900 / 1800MHz; WCDMA: 900 / 2100MHz (Europe)
W4: GSM: 850 / 1900MHz; WCDMA: 850 / 1900MHz (US / Canada)
Bhatiri (spare) (50€)
Mutauri Microphone (60€)
Desktop Chaja (50€)
Kanyanga (kupembedza) (30€)
Bhandi clip (spare) (9€)
Chaja ye USB (spare) (14€)
Inrico T199 3G / Wifi (Android yakavhurwa) huwandu
Iyo Inrico T199 ndeye 3G / WiFi Android Radio, isina kuratidzwa, kune yakakosha kushanda. Unogona kuisa maapplication kubva pakombuta yako kuenda kuredhiyo kuburikidza neiyo USB port.
Kamwe redhiyo painenge yakabatana nekombuta, iwe unoshandisa koni kuronga chirongwa chaunoda kushandisa, senge PTT4U kana Zello.
WCDMA / 3G: 850/2100 MHz
Certificate: Chitupa cheECC
Ndino gadzira sei Zello pane Inrico T199 network radio?
Kutanga neshanduro 4.08, iyo Zello Android app ichatsigira isina screen network maredhiyo senge Inrico T199 inoratidzwa pazasi:
Kumisikidza uye kugadzirisa Zello yeiyo Inrico T199 tevera nhanho idzi.
Kuisa iyo Zello app uye kugadzirisa account
Sezvo mudziyo wacho usina skrini, iwe unofanirwa kushandisa komputa kuimisa.
Dhawunirodha yeApple remote control application kune komputa yako. Semuyenzaniso, Vysor ndeimwe yakadaro app inoshanda pane ese Mac uye Windows PC. CHERECHEDZA: Zello haina hukama, kana kutsigira, Vysor.
Unganidza iyo Inrico T199 pakombuta yako uchishandisa tambo yeUSB.
Shandisa Vysor kugadzirisa chishandiso uye isa Zello kubva kuGoogle Play kana iyo Zello webhusaiti.
Mepu yekusundira-ku-kutaura bhatani uye echipiri mabhatani
Mune Zello app, enda kuMenu> Sarudzo> Push-to-talk mabhatani.
Dzvanya paki "+", wobva wadzvanya bhatani rePNT kudivi remuchina. Iyo Zello PTT bhatani ichawedzerwa kune iyo runyorwa.
Dzokorora mamwe mabhatani.
Kune bhatani rega rega rakawedzerwa pane iyo runyorwa, unogona kugadzirisa bhatani ruzivo uye sarudza yakatarwa chiteshi kana kubatika kuti utore kumusoro nayo kana bhatani rakadzvanywa. Izvi zvinonyanya kubatsira mabhatani echipiri. Semuenzaniso, unogona kuve nemabhatani echipiri akakwenenzverwa kune chiteshi chekukurumidzira kana kubata kuitira kuti vagare vachiwanika.
Mepu Zello chiteshi uye vanobatana neiyo Inrico chiteshi knob
Inrico T199 radio inosanganisira chiuno chinokutendera kuti uchinjike nemikana. Kuti utore Zello chiteshi kumatanho enhamba paT199, ita zvinotevera kubva kuZello app:
Vhura iyo "Channel" skrini uye tinya pane chiteshi chaunoda kuisa mepu. Iyo hurukuro skrini yeiyi chiteshi icharatidza.
Kubva pane yekutaura skrini, tinya pamuseve pasi icon, wobva wasarudza "Rename chiteshi".
Chinja zita rechiteshi kuti riise a maviri-manhamba manhamba ekutanga kuenzanisa nhamba yemukoto pachiuno. Semuenzaniso, kana iwe uine chiteshi chakanzi "CB Shamwari" uye iwe uchida kuimaka kuti umise # 13 yeiyo knob, itumidze iyo kuti "13 CB Shamwari". Kune mageru ane nhamba dziri pasi pegumi shandisa zero inotungamira (kureva "10", "01" nezvimwewo). Unogona mepu kusvika pamatanhatu gumi nematanhatu uye nhare dzakabatana.
Buda mugero yekutaura skrini uye wobva watenderedza pfundo kuti uedze shanduko dzako. Kana chiteshi chasarudzwa, zita rayo richaziviswa uchishandisa zvinyorwa-kutaura-kutaura. Mikana yacho inoshandurwa mukuwanda kwavo kwenhamba. Semuenzaniso kana uine migero 01, 07 uye 13 yakapihwa, kutenderera pfundo kunogadzira chiteshi chinoteedzana zvinotevera: 01 -> 07 -> 13 -> 01 -> 07, nezvimwe.
Dzokorora nhanho 1-4 kune ese mageru uye maonana aunoda mepu. Nekudaro, kune vekutaurirana, pachinzvimbo chekusarudza "Channel" mudanho rekutanga, iwe waizovhura iyo "Yemaficha" skrini uye wozosarudza uye kutumidza mazita ewaunoda kuisa mepu. Ive nekuchengera kushandisa yakasarudzika prefixes yemakosi akasiyana uye vanobatika.
Ndokumbira utarise kuti kana uchishandisa ZelloWork chiteshi nemazita emushandisi, mazita ekuratidzira anodzorwa pakati peZelloWork web manejimendi manejimendi. Kuti uve nechokwadi chekwakarongeka kwemagero uye vanobatika, ita shuwa yekuzvitumidza mazita zvakakodzera necomputer console.
Iva wekutanga kuongorora "Inrico T199 3G / Wifi (Android yakavhurwa)" kukanzura mhinduro
Sale! 508€ 457€ Wedzera ngoro
305€ Read more
Sale! 406€ 355€ Select mikana